BMOI : masoivoho faha-17 eny Andraharo | NewsMada
BMOI : masoivoho faha-17 eny Andraharo
Notokanana ny zoma lasa teo, ny masoivoho ny Banky malagasy aty amin’ny ranomasimbe InNdianina (BMOI) eny Andraharo. Masoivoho faha-17 ity hita eny amin’ny faritra Galaxy Andraharo ity, ao amin’ny tranobe Kube D. Tanjona ny hanatonana akaiky hatrany ny mpanjifa sy ny mpandraharaha, sady faritra be orinasa vaventy sy salantsalany rahateo eny amin’ity toerana ity. Nanatrika ny fotoana ny mpiara-miombon’antoka sy ny mpanjifa.
Nampahafantarina tamin’ity fotoana ity koa ny tale jeneraly vaovao ny BMOI, i Alain Merlot, tsy vahiny eto Madagasikara sy eo anivon’ny vondrona BPCE iraisam-pirenena, orinasa renin’ny BMOI. Nambaran’ny filohan’ny filankevi-pitantanan’ny BMOI, Andriantsitohaina Naina, fa « nomena olona manan-danja avy ao amin’ny vondrona BPCE izahay hampiroboroboana ny BMOI, hikarakarana sy hanomezana tolotra sahaza ny mpanjifa ».
Banky malagasy nahazo voalohany ny Iso 9001-2015
Nampahatsiahivin’ny tale jeneraly, i Alain Merlot, hikarakara ny mpanjifa eto Madagasikara sy manerana ny tambajotran’ny BMOI. Ao anatin’izany ny fanajana ny kalitao, ny fiarovana ny tsiambaratelon’ny mpanjifa, fototry ny tarigetran’ny BMOI. Avy amin’ireo ny nahatonga azy ho banky malagasy voalohany nahazo ny mari-pamantarana Iso 9001-2015. Manamarina izany fa anisan’ny banky mavitrika sy matanjaka eto Madagasikara izy amin’ny fitsinjovana ny mpanjifa.
Nanatrika ny fotoana, ny zoma teo koa, ny admnisitratera vaovaon’ny vondrona BCPE iraisam-pirenena, Sylvain Fort. Maherin’ny 8.000 ny maosivohony maneran-tany. « Endriky ny fanantenana mitsiry vaovao ho an’ny ho avy ny fisokafan’ny masoivoho vaovao toy izao », hoy izy.
Marihina fa mivoha amin’ny 8 ora hatramin’ny 4 ora hariva ny BMOI eny Andraharo. Ahitana ny tolotra rehetra, toerana manokana fakam-bola aotomatika (Gab).